Shenzhen BoRun Electronics Co., LTD ari Manufacturer kuti USB C nomusimboti, USB C wire, Wireless mundiro kubva 2013, simba RD kugona, achitungamirira wedzerai cheni zvinhu, mu-pekugara mufekitari chivako tikwanise kupa mudiwa OEM & OBM & ODM basa hanya MOQ uye zvemakwikwi mutengo.
Nepo unofanira hombe vanotengesa chigadzirwa wenyu Marketing pano tine pachake fekitari kubudisa zvinhu zvenyu, dzichengete quality, apo unofanira customized zvimwe zvigadzirwa takasangana mainjiniya kwamuri. tinonzwa pfungwa dzako uye kugoverana pfungwa dzedu kushandira pamwe. Nemhaka yedu engineering, kugadzira, kuongorora nezvaanogona inotsigira kuti tive munhu-vanorega mhinduro Provider dzakakwirira nomukurumbira munyika Marketing.
Zviri Lucia uyo kudzidza Shenzhen University pamwe Bachelor kwakaita Degree muna Marketing, kubvira 2014 Kana ndakabatana Macverin uye vakanakidzwa mushandirapamwe uye upenyu hwangu navo uye kunyanya kukonzera muchiso chivakwa uye kukwidziridzwa. Ko unofanira chero yokutengesa kuongorora kana mashoko ndapota kutaura neni.
Zviri Eunice uyo kudzidza Shenzhen University pamwe Bachelor kuti dhigirii mubhizimisi Chirungu, ndinoda Chirungu uye kudzidza dzakasiyana shoko-rakapamhama, kubvira 2013 ndakabatana Macverin I nazvo unyanzvi nyanzvi uye kuziva sei kupa zvakanakisisa wedzera-tsika kuti vatengi, Ndichava pano chikwata changu kupa 24 * 7 Instant basa.
Zviri Paul uyo kudzidza HUNAN Engineering Technology yunivhesiti iri zvemagetsi, ndakapedza zvose nguva yangu kudzidza Apple zvinhu uye dzinokura nokuti ndiri Super kurudza kana ndiri kushanda Macverin ndinogara kunge kutanga mazano chigadzirwa itsva, zvinotora zvakawanda kurerukirwa nokuti magumo vanoshandisa nokuti ndinoziva zvido zvenyu.
Zviri Gavin anoshanda sezvo Mugadziri Macverin, Ndinofarira kudhirowa, mumhanzi uye magadzirirwo, nyika iri saka zvinoshamisa uye ndinotevera mwoyo wangu tast nguva dzose, shongedza zvose nemaoko uye pfungwa, muna Macverin isu iwe kupa wakasununguka pasuru kumusika zvinhu zvakagadzirwa nezvinhu hanya MOQ, ndini maoko enyu 3rd sezvo negadziriro yeparutivi.
YEDU ADD- VANOKOSHESA SERVICE
Tine zvedu epurasitiki womuenzaniso nokugadzira nhengo jekiseni fekitari .this rikurumidze ODM Delivery nguva yokuti vamwe vedu.
Rich ruzivo RD dhipatimendi kumusika maneja chigadzirwa tikwanise kupa rakasiyana patented magadzirirwo vaitaura kuti vamwe vedu.
Original mu-pekugara kugadzira mano tikwanise kupa yepamusoro vaitaura kuti vakaroorana.
100% yepamusoro rokuongorora pamberi pakukurukura uye mwero yedu chakaremara asingasviki 0.3%.
24 7 nguva chaiyo kwerubwinyo rwakagara rwuripo pashure okutengesa basa nechokwadi iwe wagona.